Toko 3352 an'ny Zanakalahy mahatalanjona ao amin'ny lalàna an-tserasera - XperimentalHamid
Toko faha-3352 an'ny Zanaka Mahagaga ao amin'ny Novel maimaim-poana amin'ny Internet
Jolay 26, 2021 by Qasim Khan
Vakio Chapter 3352 amin'ny tantara Ilay Zanakalahy Mahagaga by Ravina Lord maimaim-poana amin'ny Internet.
Niondrika i Walter, noraisiny ny findain'ilay ankolafy hafa, ary nojereny vetivety, ary lasa ratsy tarehy tsy manam-paharoa ny endriny iray manontolo!
Tena tsy nampoiziny hoe manana tahiry stratejika be dia be toy izao i Hamid.
Ny mijery fotsiny ireo tahiry ireo dia tsy olana velively ny fihazonana herintaona.
Ka nanontany azy izy avy eo hoe: "Avy aiza ireo sary ireo?"
Hoy ny antoko iray hafa tamin'ny feo mangatsiaka: "Irak'i Hamid daholo no naniraka azy rehetra!"
Kivy ny fihetsik'i Walter. Nihidy vazana izy ary nilaza hoe: “Hamid dia ao amin'ny tafika isika!”
Hoy izy: “Tsy anjarako ny manapa-kevitra ny hanao fihavanana sa tsia izao, dia hanao tatitra amin'ny Commander Tampony avy hatrany aho, ary izy no hanapaka ny zava-drehetra!”
Ny andaniny dia nilaza tamim-panesoana hoe: “Tsy manome fcuk anao aho, tonga fotsiny aho hilaza aminao fa efa nifanaraka tamin'ny ankilany aho, tamin'ny 3 ora tolakandro, ho tonga any amin'ny barracks miaraka amin'ny angidimby ny mpirakidraharaha an'i Hamid. . ”
“Amin'izay fotoana izay dia hiresaka am-pihavanana aminy mivantana aho, na mandray anjara ianao na tsia!”
Rehefa avy nilaza izany izy dia naka ny findainy avy teny an-tanan'i Walter. Nihodina ary lasa.
Walter dia namaoka hatsembohana mangatsiaka eraky ny handriny, ary avy eo dia namoaka ny findainy satelita ary niantso an'i Joseph izay lavitra tany Chine.
Amin'izao fotoana izao, Joseph. Tao amin'ny tranobe taloha an'ny fianakavian'i Wan, tena afa-po mijery ireo vatam-paty mora am-polony miavosa ao an-tokotany.
Ireny vatam-paty ireny dia namboarina tsirairay niaraka tamin'ny zana-kazo manify sy lo efa natambatra.
Na dia hosodokoina loko mena faran'izay ratsy kalitao aza ny vatana iray manontolo, dia hita ihany koa eo amin'ny takelaka vatam-paty ireo izay ampy hamenoana valin'ny volafotsy dolara.
Ankoatr'izay, ny fofon'ity loko tsy dia manara-penitra ity dia marefo, na dia eo amin'ny toerana malalaka aza, fa koa mahatonga ny olona hahatsapa tsy mahazo aina amin'ny maso sy ny tenda.
Nijery vidy marobe hatrany amin'ny vatam-paty tafahoatra i Joseph, ary nitsikitsiky tena afa-po izy ary nanontany an'i Harmen hoe: “Harmen, taiza no nividiananao ity antontam-boaloboka ity? Niaina nandritra ny 20 taona mahery aho, saingy mbola tsy nahita vatam-paty lo toy izany …… ”
Nihomehy i Harmen: “Raha miverina amin'ny Commander faratampony, tena tsy mora hita ireo vatam-paty ireo, nitondra olona tany amin'ny faritra be tendrombohitra mahantra aho. Avy eo nangataka an'ireo mpandrafitra taloha hamono azy ireo mandritra ny alina …… ”
Raha nilaza an'izany izy dia nandondona ny vatam-paty tamin'ny iray tamin'ireo vatam-paty ary nihomehy: "Milaza ny olona fa ny matevina kokoa amin'ny vatam-paty dia tsara kokoa, fa ny hatevin'ity tabilao vatam-paty ity dia tsy matevina toy ny tabilao fandriana ampiasaina any ambanivohitra."
“Nilaza tamiko ilay mpandrafitra taloha fa na dia faritra be tendrombohitra aza izy ireo. Saingy tsy misy olona ao an-tendrombohitra vonona ny hampiasa vatam-paty ambany toy izany, aleon'izy ireo manapaka ny hazo any an-tendrombohitra, manangona kitay matevina ampy hangataka amin'ny mpandrafitra hanao vatam-paty, fa tsy matory ao amin'ity lamba ity, voalaza fa ity voaomana manokana ho an'ireo tokantrano mahantra taloha tsy manan-janaka, mora vidy tokoa. ”
“Tsara, tena tsara.” Niondrika tamin'ny fahafaham-po i Joseph ary nilaza hoe: “Andro iray mialoha ny Fetin'ny Qingming dia mitondra olona ampy ianao handefa ireo vatam-paty ireo amin'ny fianakavian'i Ye!”
“Raha vonona ny hanome an-tsitrapo an-tsitrapo an'i Yeling Mountain ny fianakaviana Ye, mangady an-tsitrapo ny vatam-paty an'i Changying sy ny razana rehetra ao amin'ny fianakavian'i Ye, manome toerana ho an'ny ray aman-dreniko ary miarahaba ny vatam-patin'ny ray aman-dreniko any alahelo, azoko atao ny miaro ny fiainana. ”
“Fa raha tsy mety izy ireo, ireo vatam-paty ireo no ho fanomezana ho azy ireo!”
Gaga mangingina i Harmen ary tsy afa-nanoatra izy fa nanontany hoe: “Commander faratampony, ny fianakavian'i Ye mba handray andraikitra handavaka ny vatam-patin'ireo razany avy eo ary hanao fisaonana ho an'ny ray aman-dreninao, afaka hanaiky izany henatra lehibe izany ve ny fianakavianareo Ye?”
Josefa tsy niteny tsy nihetsika hoe: “Raha manaiky izy ireo dia avelako ain'alika izy ireo; raha tsy manaiky izy ireo dia omena ho azy ireo vatam-paty ireo! ”
Nanontany azy i Harmen: “Commander faratampony, raha manaiky ny fe-potoana iainanao ny fianakavian'i Ye, inona no hataonao amin'izany fiovana izany? Efa an-taonany maro izy no maty. ”
Nangatsiaka i Joseph nilaza hoe: “Efa nomaniko mialoha izay hitranga aminy. Mba ho hitan'ny fanahin'ny ray aman-dreniko any an-danitra fa novaliako tamin'ny farany ny fifanolanan-drà! ”
Tamin'izay fotoana izay dia tonga nihazakazaka tamim-pilaminana niaraka tamin'ny telefaona zanabolana i Joseph ary nilaza hoe: “Komandà Farany! Antso iray avy amin'ny King Wolf Wolf Eyed! Nilaza izy fa manana zava-dehibe hotaterina aminao! ”
Niondrika i Josefa ary niteny hentitra hoe: “Aleo izy manana vaovao tsara holazaina amiko!”